Astaamaha: system Nidaamka gudbinta wuxuu qaatay nalka saxda ah ee kubbadda korantada ee la soo dhoofiyay, wuxuuna toosiyaa khadka toosan ee toosan ee wadada tareenka wuxuu hubiyaa saxnaanta sare, dhaqdhaqaaqa deggan iyo gariirka yar. Sp Biyo-qaboojinta bilaa-bilaa-gariirka, buuqa yar, xoogga goynta xoog badan iyo socodsiinta cufnaanta waqtiga dheer. Driver Darawalka sare ee waxqabadka heer sare wuxuu xaqiijiyaa xawaare dhakhso leh iyo saxsanaan sare. Proof Caddaynta boodhka-adag iyo naqshada-biyuhu waxay xaqiijinayaan nadaafad iyo ilaalin miridhku leeyahay qaybaha farsamada ah, waxay ka dhigaan shaqada dayactirka e ...
3 dhidibka 4 dhidibka 6090 CNC mashiinka router
Mashiinka Calaamadda Yar ee Fiber Laser 20W, 30w, 50W
Mashiinka Calaamadaha Fiber waa mashiinka calaamadaynta ugu caansan sannadihii la soo dhaafay, kaas oo si gaar ah ugu habboon calaamadaynta qalabka birta. Mashiinkeenna calaamadaynta ayaa qaadata xargaha dharka sare iyo nidaam muraayad ah xasillooni aad u sarreeya, kuwaas oo si fudud ula kulmi kara inta badan barnaamijyada sumadda laser ee caadiga ah, sida biraha / astaamaha / jilayaasha caagga ah, qaabka qoraalka, astaamaha astaanta, Calaamadda QR-ka oo loo adeegsado goobta sare saxitaanka calaamadeynta. Astaamaha 1. Bandhigga Saxeexo oo Fiican, Calaamadeyn kartaa naqshada saxda ah o ...
Mashiinka CO2 goynta iyo mashiinka xardho ee looxa looxa
DA1325 / DA1530 Taxanaha noocyada goynta laser goynta ayaa caan ku ah dharka, saxeexyada iyo dharka. Waxay ka kooban tahay jaangooyooyinka degdega oo leh adkeyn sare iyo dhismeyaal dogob leh aluminium xoog badan. Waxa intaas ka sii badan, waxa lagu farsameeyaa mashiinka miinada ee weyn. Kuwani waxay hubiyaan xasilloonida iyo saxnaanta mashiinadan. Tilmaamaha 1.High dhaqaaqa firfircoon ee wadada iyo jihada toosan ee hagista tareenka waxaa loo qaatay si loo gaaro jawaab degdeg ah iyo waxqabadka xasilloon. Nidaamka-boodhka si looga fogaado d ...
Mashiinka Calaamaynta Calaamadda ee CO2
Mashiinka sumaynta CO2 leyshka laser waxaa si gaar ah loogu sameeyay warshadaha sumaynta biraha. Mashiinkan leh tuubada dhalada CO2 galaas ah (Optional asalka American RF tube tube) speed xawaaraha aad ayuu u dhakhso badan saxnaankuna aad ayuu u sarreeyaa. Astaamaha Mashiinka 1.High saxnaanta iyo xawaaraha dhakhsaha leh. Calaamadeynta qoto-dheer waxaa lagu xakameyn karaa ikhtiyaar ahaan. 2. Codsi ballaaran. Waxay astaan ​​u noqon kartaa inta badan biraha aan ahayn. 3. Khadadka calaamadaynta ayaa cad, waxay ka hortegi kartaa xidhashada culus. Nidaamka indhaha ayaa si buuxda loo xidhay, waxay ka hortegi kartaa boodhka soo gala ...
Mashiinka Calaamadaha Fiber Laser 20W, 30W, 50W
6090 Yar yar oo MDF Giraya mishiinka routerka CNC 600 * 900mm
Mashiinka Calaamaynta Laser UV
Qalabka Quudinta Gaarka ah ee Laser Cuter Mashiinka DA1610F
Astaamaha DA 1610F mashiinka laser ee leh habka wadista baabuurta ayaa si balaadhan looga isticmaalaa warshadaha dharka. Waxqabadka shaqada si heer sare ah ayaa loo wanaajiyey. Xal ikhtiyaar ah oo leh nidaamka kamaradaha CCD. Dharka warshadaha ee lagu dabaqi karo, warshadaha kabaha, kabaha kabaha, dharka dharka, dharka qurxinta, toy, calaamadaha ganacsiga gaarka ah, bacaha hawada, maqaarka, boorsada, xerada, isboortiga, isgaarsiinta gawaarida. Qalabka lagu dabaqi karo maqaar dhab ah, maqaar dabiici ah, maqaar jilicsan, maqaar qurxin, maqaar baakad lagu xiray, iwm, dhammaan noocyada maqaarka maqaarka ...